Mavesatra ny tsy fahampian-drano any Afganistana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 24 Oktobra 2018 9:36 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Español, Nederlands, 繁體中文, English
Nihena tanteraka ny haavon'ny rano ambany tany tao an-drenivohitra Kabul nandritra ny taona vitsivitsy izay. Nitatitra ny Mpanara-maso ara-toetany ao Etazonia fa nihena teo ho eo amin'ny 1,5 metatra isan-taona ny haavon'ny rano ao Kabul teo anelanelan'ny taona 2004 sy 2012. Midika ho fahakelezan'ny fifehezana fandaniana ny fahalemen'ny lalànan'ny toby fitrohan-drano an'ny tsy miankina amin'ny fanjakana. Maminavina ireo manampahefana Afgana fa ho ritraao anatin'ny 10 taona ny rano rehetra ambanin'ny tany ao an-drenivohitra .
Nifampiresaka tamin'ireo tantsaha tompon'ny toeram-pambolena tongolo tany ao atsinanan'i # Kabul izahay androany, iray amin'ny fanamby lehibe atrehin'izy ireo ny fihenan'ny haavon'ny rano ambany tany nandritra izay taona maromaro izay.
#WaterMatters:Eo anelanelan'ny krizin'ny rano “Ny tanàna folo metropolita any atsimo dia i : Sao Paulo, Buenos Aires, Mexico City, Sanaa, Karachi, Kabul, Beijing, Bangalore, Istanbul ary any amin'ny kaontinantanay, Nairobi.
Na dia izany aza, tombanana ho 80% amin'ny mponina 6 tapitrisa ao amin'ny tanàna no tsy mahazo rano fisotro, raha araka ny fanadihadiana nataon'ny Ivon-toerana Federalin'ny Haitoetany sy ny loharanon-karena voajanahary dia 59% ny rano avy any an-tanànan'i Kabul no tratran'ny bakteria
Noho ny tsy fisian'ny fitehirizan-drano, lakandrano sy tohodrano dia 30 ka hatramin'ny 35% ny rano avy any tendrombohitra no mijanona any Afganistana ary lasan'ny mpifanolo-bodirindrina ny sisa.
Mety hahatratra hatramin'ny 11 lavitrisa dollara ny vola lany amin'ny famahana ny olan'ny rano ao Afganistana. Niteraka fihenan'ny fanampiana fa tsy fitomboana ny fahavizanan'ny mpamatsy. Manakivy amin'ny fananganana fotodrafitrasa ihany koa ny olana eo amin'ny fiarovana. Notafihan'ny Talibana ny tohodrano Salma, notohanan'i India any amin'ny faritra andrefan'i Herat tamin'ny taona 2017. Miaramila Afgana folo no maty nandritra ny fifandonana.
Vao maika manamafy ny olana ny fitombon'ny mponina haingana. Ankehitriny, tanàndehiben'ny mponina maherin'ny dimy tapitrisa rakotry ny vovoka i Kabul, izay tsy manana afa-tsy fotodrafitrasa mahazaka ny ampahadimin'ny mponina monja.
Hahatratra hatramin'ny 9 tapitrisa ny mponina ao Kabul amin'ny taona 2050, ka izy no tanàna fahadimy mitombo haingana indrindra maneran-tany. Miverina ireo mpitsoa-ponenana, ary mandositra ny tsy fandriampahalemana any ambanivohitra ny olona. Amin'ny ankapobeny, maherin'ny 80% amin'ny mponina no miaina any amin'ny fanoresanana tsy voaomana. Maro amin'ireo mponina no mividy rano avy amin'ireo mpihady fatsakana na manandrana manamboatra ny lavadranon'izy ireo ihany koa.
Naminavina ny mpiasan'ny fanisam-bahoaka any Afganistana fa hahatratra 43 tapitrisa ny mponina ao amin'ny firenana afaka 20 taona raha 37 tapitrisa amin'izao fotoana izao, manampy amin'ny rarintsaina manoloana ireo loharano sarobidy. Amin'izao fotoana izao, misy ny famantarana fampitandremana maro ary tsy hita izay fivoarana tsara